Kodzero-dzevanhu, 21 Chivabvu 2017
Svondo 21 Chivabvu 2017
Sangano reDzisvondo Pasi Rose Roshushikana neKushupika Kuri Kuita Vanhu muZimbabwe
Chikwata cheWorld Council of Churches icho chiri kushanya munyika chinoti hachisi kufara nekudzikira kwaita hupfumi hwevanhu muZimbabwe izvo zviri kukonzera kuti vakawanda varambe vachibuda munyika vachinotsvaga chekubata kune dzimwe nyika.
NSSA Yobatsira Vakuvari, Asi Vari paMudyandigere Votsamwiswa neMari Dzavari Kupihwa
Apo vanhu vari kutambira mari yemudyandigere vari kuramba vachichema-chema kuti mari yacho ishoma, gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu, Amai Prisca Mupfumira, vanoti hurumende iri mushishi kugadzirisa nyaya iyi.
Mapurisa Anokanda Zvinokachidza Panga Pakaungana Muzvare Khupe neVamwe Vavo
Vachitaura mushure mechiitiko ichi, Muzvare Khupe vati ivo nevamwe vavo vanga vakaungana pane mumwe musha uri mu Ward 9 vachitaura nevatsigiri vavo pasi pechirongwa chavo che Bereka Mwana.
Gukurahundi Yokonzera Mutauro Mudare reParamende
Dare repamende ratanga kuzeya bhiri remutemo weNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC.
Manicaland Youth Expo Vofarirwa neVechidiki Zvakanyanya
Murimi wemabanana kuHonde Valley kuNyanga, VaKenneth Dziwire, vanoti kuuya kwavo kuno kwaMutare kunovapa mukana wekuti vashambadzire zvirimwa zvavo kuvatengi uye kuwanawo dzimwe njere mukukurima dzimwe mbesa dzinowanisa pundutso.
Vechidiki kuHopley Voyamurika neMabasa
Mugari wemuHopley, Muzvare Rumbidzai Gwanzura, vanoti vanofara zvikuru sezvo pamusoro pekuwana basa pari zvino, vakawana zvidzidzo zveplumbing izvo zvichavabetsera mukuwana raramo.
Amai Mujuru Votarisirwa Kusangana neVatsigiri Vavo muHarare neMugovera
Vechidiki mubato reNational People’s Party mudunhu reHarare vanoti vakakoka vakafanobata chigaro chemutungamiri webato ravo Amai Joice Mujuru kuti vange vachitaura pamusangano wavachaita neMugovera mumusha weChitungwiza.
Chivabvu 17, 2017
Mushandi Anonwira Kambani yeAllied Timbers Muchetura
Mumwe mushandi wekambani yemapuranga yeAllied Timbers maMutare amwa mushonga achida kuzviuraya senzira yekuratidza kurwadziswa kwaari kuitwa nekambani yeAllied Timbers iyo isiri kupa vashandi vayo mihoro yavo.
Motokari Yaitandaniswa neMapurisa Inouraya Munhu Mumwe Chete, Vatatu Vakakuvara
Mota yakatsika vanhu ava yainge ichitiza motokari yekambani yeClyna Trading iyo yakapihwa basa rekusunga mota dzinotyora mitemo yemimigwagwa muguta reKaroi.
United Nations Yobatsira Vanhu Vakawirwa neDambudziko reMafashamu eMvura
Bazi reUnited Nations rinoona nezverubatsiro rwechimbi chimbi, re Central Emergency Response Fund, rakapa neChitatu hurumende yeZimbabwe mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu zvemadhora yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura.
Vemichovha muSouth Africa Vonetsana neZvizvarwa zveZimbabwe
Hondo yevemichovha muSouth Africa iyo inonzi yave kubata zvizvarwa zveZimbabwe zvinotakura vanhu kubva muMusina kuenda kumuganhu wenyika mbiri idzi weBeitbridge.